သီးသန့်မူဝါဒ | Zeevou
Zeevou သည် Zeevou Ltd. ၏ကုန်သွယ်ရေးနာမည်ဖြစ်သည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်အသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည်သင်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ data ကိုဘယ်လိုစုဆောင်းသလဲ?
ငါတို့သည်သင်တို့၏ data ကိုဘယ်လိုသိုလှောင်သလဲ?
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို cookies များကိုအသုံးပြုကြတာလဲ?
ကျနော်တို့ cookies များကိုအမျိုးအစားကဘာလဲအမျိုးအစားများကိုသုံးပါသလဲ?
သင့်ရဲ့ cookies တွေကိုဘယ်လိုစီမံရမလဲ
အခြားသော website ၏ privacy မူဝါဒများ
Zeevou အောက်ပါအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည် -
အခြား guests ည့်သည်များ၏အမည်များ (အသက် ၁၆ နှစ်အထက်)
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်ဟုယူဆသောအခြားသတင်းအချက်အလက်များနှင့် (သို့မဟုတ်) လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး (ဟိုတယ်မှတ်တမ်း) အမိန့် ၁၉၇၂ သို့မဟုတ်အခြားသက်ဆိုင်ရာဥပဒေဆိုင်ရာဒေသဆိုင်ရာဥပဒေအရလိုအပ်သည်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု၏မျက်နှာပြင်နှင့်သင်၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာသရုပ်ခွဲအချက်အလက်
Zeevou ကိုသင်စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်အများစုကိုသင်တိုက်ရိုက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်အချက်အလက်များကိုကောက်ယူစုဆောင်းသည်။
အွန်လိုင်းမှာမှတ်ပုံတင်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်မည်သည့်အမှာစာမှာမဆို။
Zeevou သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုအောက်ပါရင်းမြစ်များမှသွယ်ဝိုက်။ ရနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်စီမံခန့်ခွဲသောကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်ရောင်းချသူများမှတစ်ဆင့်မှာယူနိုင်သည်။
အကယ်၍ အလုပ်ရှင်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကသင့်အတွက်တိုက်ခန်းကိုကြိုတင်မှာယူထားပါကသင်မှတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲအထက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို (သင့်ကိုယ်စားဘွတ်ကင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်) ရယူနိုင်သည်။
Zeevou ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်ရန်သင့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည် -
သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဟုထင်သောအခြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအထူးကမ်းလှမ်းမှုများဖြင့်သင့်အားအီးမေးလ်ပို့ပါ
Zeevou မှတစ်ဆင့်စာရင်းပြုစုသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုသူတို့၏စီးပွားရေးကိုခြိမ်းခြောက်သောဖောက်သည်များထံမှအမှာစာများကိုတားဆီးရန်ကူညီပါ။
သင့်ရဲ့အမိန့်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် Zeevou ကိုအသုံးပြုပြီးအခြားပါတီများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေပါ။
၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ၄ င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ဤပေါ်လစီကိုပြcing္ဌာန်းခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအလွဲသုံးစားမှုတားဆီးခြင်း
သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေများနှင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သောသို့မဟုတ်တရားမျှတသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါက၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့်အရည်အချင်းရှိသောအာဏာပိုင်များကိုကူညီခြင်း။ နှင့်
၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်နှင့်ပတ်သက်သောအငြင်းပွားမှုများတွင်အရေးယူခြင်း
သင်စာရင်းသွင်းထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင်အကြောင်းအရာနှင့်နေရာအသေးစိတ်ကိုသင့်အားတင်ပြပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Zeevou ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် (ဥပမာ whitepaper ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်) တွင်သင်ဖြည့်ထားသော 'ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ' သို့မဟုတ်အခြားဝဘ်ဆိုဒ်ပုံစံများကိုတုံ့ပြန်ပါ။
၀ င်လာသည့်တောင်းဆိုမှုများ (ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှု၊ အီးမေးလ်များ၊ ချက်တင်များသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ) ကိုဆက်လုပ်ပါ။
Zeevou အပလီကေးရှင်းများကိုအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင့်အားထောက်ပံ့ပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူပေါ်တယ်သို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ထိုကဲ့သို့သောအမိန့်အတည်ပြုခြင်း, လိုင်စင်အသေးစိတ်, ငွေတောင်းခံလွှာ, သတိပေးချက်များနှင့်တူသောအဖြစ်စာချုပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားလုပ်ဆောင်ပါ။ စာချုပ်သည် Zeevou နှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ Zeevou အဖော်နှင့်ဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ (စနစ်မက်ဆေ့ခ်ျများ) ကိုမည်သည့်အနှောင့်အယှက်ပေးမှုများအကြောင်းသင့်အားအကြောင်းကြားပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူရန်သင့်အားဆက်သွယ်ပါ။
အော်ဒါမှာထားခြင်းဖြင့် Zeevou သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကုမ္ပဏီများနှင့်မျှဝေနိုင်မည်ဟုသင်သဘောတူသည်။ သို့မှသာသူတို့သည်သင့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
Zeevou မှတဆင့်စာရင်းသွင်းထားသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ပံ့ပိုးသူများ (သင်သူတို့နှင့်တိုက်ရိုက်အမှာစာများပါ ၀ င်ပါကသို့မဟုတ်အထုပ်အမှာစာအဖြစ်)
ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအမည်ဝှက်ခြင်းသို့မဟုတ်စုစည်းထားသည့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မျှဝေခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်မဖော်လိုသောသို့မဟုတ်စုစည်းထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာအသုံးပြုနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသိလျက်သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။
Zeevou သည်သင်၏အမှာစာကိုပြုလုပ်သည့်အခါလိမ်လည်မှုကို ၀ ယ်ယူခြင်းမှကာကွယ်ရန်၎င်းသည်သင့်အချက်အလက်များကိုခရက်ဒစ်ရည်ညွှန်းသည့်အေဂျင်စီများသို့ပေးပို့နိုင်သည်၊
Zeevou သည်နောက်ဆုံးပေါ်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပြုပြီးသည့်နောက် ၅ နှစ်အတွင်းသင်၏ဒေတာအားလုံးကိုသိမ်းထားလိမ့်မည်။ ဤအချိန်ကာလကုန်ဆုံးပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာဘေ့စ်မှဒစ်ဂျစ်တယ်သဲလွန်စအားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
Zeevou သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဟုထင်သောငါတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကုမ္ပဏီများ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားပေးပို့လိုပါသည်။
Zeevou သင်၏ဒေတာကာကွယ်ရေးအခွင့်အရေးအားလုံးကိုသင်အပြည့်အဝသတိပြုမိစေရန်သေချာစေလိုသည်။ အသုံးပြုသူတိုင်းသည်အောက်ပါအခွင့်အရေးများရှိသည် -
ရယူပိုင်ခွင့် - သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်မိတ္တူများကို Zeevou အားသင်တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အခကြေးငွေအနည်းငယ်သင့်အားကျသင့်ပါမည်။
ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့် - Zeevou မှသင်ယုံကြည်သောမည်သည့်အချက်အလက်မဆိုမှန်ကန်သည်ဟုတောင်းဆိုရန်သင့်တွင်အခွင့်အရေးရှိသည်။ မပြည့်စုံဟုသင်ယုံကြည်သောအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ရန် Zeevou ကိုသင်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဖျက်ပိုင်ခွင့် - သင့်အနေဖြင့် Zeevou သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအချို့သောအခြေအနေများတွင်ဖျက်ရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့် - သင့်အနေဖြင့် Zeevou သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအပြောင်းအလဲအချို့အခြေအနေများတွင်ကန့်သတ်ရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့် - သင်သည်အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Zeevou ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဒေတာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေရန်လက်ျာ - သင့်အနေဖြင့် Zeevou မှကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကိုအခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့သို့မဟုတ်အချို့သောအခြေအနေများအောက်သို့တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင်တောင်းဆိုချက်တစ်ခုပြုလုပ်ပါကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်ရန်တစ်လရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအခွင့်အရေးတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ info@zeevou.com
+44 (0) 800 9553966 သို့ခေါ်ဆိုပါ
သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ထံစာရေးပါ - 1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, ဂျာစီ
ကွတ်ကီးများဆိုသည်မှာစံပြအင်တာနက်မှတ်တမ်းအချက်အလက်နှင့် behavior ည့်သည်များ၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထားရှိသည့်စာသားဖိုင်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်လည်ပတ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် cookies များသို့မဟုတ်အလားတူနည်းပညာများမှတစ်ဆင့်သင့်ထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်စုဆောင်းနိုင်သည်
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်, allaboutcookies.org သွားရောက်ကြည့်ရှု။
Zeevou ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်အက်ပ်တွင်သင်၏အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှသင်၏လည်ပတ်မှုခြေရာကောက်
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း - Zeevou သည်ဤ cookies များကိုကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုပြီးသင်၏ယခင်ရွေးချယ်ထားသော ဦး စားပေးချက်များကိုမှတ်မိစေရန်ဤ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘာသာစကားနှင့်သင်တည်နေရာကိုပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ပထမပါတီနှင့်တတိယပါတီ cookies များကိုရောနှောအသုံးပြုသည်။
ကြော်ငြာခြင်း - Zeevou ကဒီ cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ သင်ကြည့်ရှုခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများ၊ နောက်ဆက်တွဲ link များနှင့်သင်၏ browser၊ device နှင့်သင်၏ IP လိပ်စာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ဤ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ Zeevou သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤအချက်အလက်၏အချို့သောကန့်သတ်ထားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုကြော်ငြာများအတွက်တတိယပါတီများနှင့်မျှဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များနှင့် cookies များမှတဆင့်စုဆောင်းထားသောအွန်လိုင်းအချက်အလက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝေမျှနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့လည်ပတ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသင်ကြည့်ရှုခြင်းပုံစံပေါ် မူတည်၍ သင့်အားကြော်ငြာကိုပြလိမ့်မည်။
သငျသညျ cookies များကိုလက်ခံရန်မဟုတ်သင့်ရဲ့ browser ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်ကို၎င်း, အထက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဘယ်လိုသင့်ရဲ့ browser ကနေ cookies များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သင့်အားပြောပြသည်။ သို့သော်အနည်းငယ်ကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှာ features တချို့ကိုရလဒ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Zeevou ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်မှုကိုနှိပ်ပါကသူတို့၏ privacy မူဝါဒကိုဖတ်သင့်သည်။
Zeevou ၎င်း၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုပုံမှန်ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးဤဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွင်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်သည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအားမတ်လ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ တွင်နောက်ဆုံးသတင်းတင်ခဲ့သည်။
Zeevou ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်ထားသည့်ဒေတာများသို့မဟုတ်သင်၏ဒေတာကာကွယ်ရေးအခွင့်အရေးတစ်ခုအားသင်ကျင့်သုံးလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ - +44 (0) 800 9553966
သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ထံစာရေးပါ - ၁၅ Sherbourne Close, Cambridge, UK CB15 4RT
သင်သည်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုကိုအစီရင်ခံလိုပါကသို့မဟုတ် Zeevou သည်သင်၏စိုးရိမ်မှုကိုစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းမရှိဟုသင်ယူဆပါကအောက်ပါလင့်ခ်ကို အသုံးပြု၍ ပြန်ကြားရေးကော်မရှင်နာရုံးသို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။